Articles tagged 'zpp'
Victims of violence suffer in silence: ZPP 12 September 2018 HARARE - Most victims of politically-motivated violence and other human rights violations triggered by the disputed July 30 polls suffered abuse silently as they feared reprisals, a report by the Zimbabwe Peace Project (ZPP) said. According to ZPP, of the country's 10 provinces, Harare had the...
'Malpractices soil Mwenezi election campaign' 23 March 2017 HARARE - The Mwenezi East by-election has been blighted by accusations of politicisation of food aid, abrogation of the right to freedom of assembly and intimidation and harassment, a rights group has said. The Zimbabwe Peace Project (ZPP) said it was worried by the unfolding events in Mwenezi...
Zanu PF in 'forced' voter registration 6 March 2017 HARARE - President Robert Mugabe's Zanu PF is forcing Mwenezi East villagers to obtain birth certificates and identity cards for the purposes of registering for the forthcoming by-election, a human rights group has claimed. The poll — proclaimed by Mugabe on February 3, and gazetted in Statuto...
Rights group opposes youth service 3 March 2017 HARARE - Rights group Zimbabwe Peace Project (ZPP) has said President Robert Mugabe's suggestion that the much-dreaded National Youth Service (NYS) be revived could result in violence. The Jestina Mukoko-led ZPP claimed that youths —popularly known as “green bombers” — trained in various camps...
'Zanu PF politicising aid in Chimanimani' 23 November 2016 CHIMANIMANI - Zimbabwe's ruling party has been accused of deliberately withholding aid from opposition supporters ahead of the Chimanimani National Assembly by-election. The by-election was called after the expulsion of former Zanu PF MP Munacho Mutezo for defecting to Joice Mujuru's Zimbabwe ...
Civil protesters on the increase: Report 25 October 2016 HARARE - Zimbabwe has seen an increase in the number of civil protesters — anti-President Robert Mugabe demonstrators not aligned to any political party — in the past months, a human rights group has said. In the country's political history, protests have always been led and taken part in by m...
'Police, Zanu PF top violence perpetrators' 29 September 2016 HARARE - Zanu PF and the police were the top perpetrators of violence in the month of August, a Zimbabwe Peace Project (ZPP) report said. According to the report, the ruling Zanu PF party came tops in violence perpetration with 42 percent while the Zimbabwe Republic Police (ZRP) were second wi...
'Social ills spike in Hwange' 11 September 2016 HARARE - Social ills — prostitution, poaching and theft — have spiked in the Hwange mining town, as unpaid Hwange Colliery Company (HCC) workers increasingly get hard-pressed, a Zimbabwe Peace Project (ZPP) report said. This comes as the town's economy is largely driven by the coal miner and i...
Opposition members denied food aid 28 May 2016 HARARE - Villagers supporting opposition parties are being excluded from food aid distribution, the Zimbabwe Peace Project (ZPP) has revealed. In its April report, ZPP said the elderly and some vulnerable members of communities were going without food aid because of partisan distribution of re...
Witnesses ready to expose Mukoko abductors 12 May 2016 HARARE - A prominent human rights lawyer has revealed that witnesses are ready to expose people who abducted Zimbabwe Peace Project (ZPP) director Jestina Mukoko eight years ago. Mukoko, a prominent television presenter-turned-human rights activist, went missing for 21 days after having been a...
Mujuru's ZPF falls victim to political violence: Report 29 April 2016 HARARE - A human rights monitor group, the Zimbabwe Peace Project (ZPP), says former Vice President Joice Mujuru has now become the target of violence orchestrated by her erstwhile comrades in Zanu PF. In a recent report, detailing the political situation for the month of March, ZPP said Presi...
Dzamara bags human rights award 13 December 2015 HARARE - Missing human rights activist Itai Dzamara was voted the Overall Human Rights Defender of the Year during the Zimbabwe Human Rights Association (Zimrights)'s annual awards ceremony held at a local hotel in Bulawayo on Friday. Dzamara was allegedly abducted by suspected State agent...
Govt urged to uphold human rights 12 December 2015 HARARE - A human rights monitor group, the Zimbabwe Peace Project (ZPP), has urged the government to demonstrate its political will in the defence and promotion of citizens' rights, arguing that civil liberties remain under threat in Zimbabwe. In a statement to commemorate the International Hu...
Lawyers intensify Chingwizi villagers' bid for freedom 8 August 2014 HARARE - Human rights lawyers have intensified their bid to have 29 Chingwizi villagers arrested for public violence freed from detention after filing a bail application seeking their release. In their bid to liberate the villagers, the lawyers on Tuesday first challenged the lawfulness of the...
Govt violating Chingwizi villagers' rights: ZPP 7 August 2014 HARARE - A rights group, Zimbabwe Peace Project (ZPP) has said government failed to respect the fundamental rights of villagers at Chingwizi transit camp. The group was also concerned with the situation unfolding following the violence that erupted over the weekend. The Jestina Mukoko-led c...
Govt dumps Chingwizi villagers — Aid agency 19 June 2014 HARARE - President Robert Mugabe's administration has abandoned desperate villagers at Chingwizi transit camp, a faith-based aid agency has said. Zimbabwe Peace Project (ZPP) has warned that disaster was looming at the camp. In its monthly report, ZPP notes that the situation at Chingwizi T...
Political tension rising: ZPP 20 November 2012 HARARE - Political tension is rising ahead of a forthcoming referendum and general election next year, the Zimbabwe Peace Project (ZPP) has said in its latest bulletin. In its monthly update of the country s political climate and human rights situation, rights group ZPP said military visibility h...